Ọrụ ikike - Shenzhen PUAS Industrial Co., Ltd.
Ngwaahịa niile sitere na PUAS nwere akwụkwọ ikike afọ atọ.
Ngwaahịa niile nwere nsogbu dị mma ,, anyị ga-eduzi ngwaahịa ọhụrụ maka dochie anya n'ime ọnwa atọ.
Anyị na-enye RMA ma ọ bụ akụkụ n'efu maka ọrụ maintance maka ihe karịrị ọnwa 3.
A gbakọtara ụbọchị nke ụbọchị site na S / N
1.Ngwaahịa karịrị oge ikike, otu nsogbu ahụ na-eme n'ime ọnwa 3 nke ụgwọ ọrụ akwụ ụgwọ, a ga-arụkwa ya n'efu.
2.Duo ị manye ihe dị egwu (Dị ka Agha, Ala Ọmajiji, ọkụ, wdg) ma ọ bụ ojiji na-ekwesịghị ekwesị, Ntinye nke nrụnye na arụmọrụ ndị ọzọ na-adịghị ahụkarị ma ọ bụ ihe ọghọm site na ọdịda anaghị enweta na ikike anaghị akwụ ụgwọ.
3.A ga-enwerịrị ụdị ngwongwo a niile e kutere ebu. Ọ bụrụ na iji mmebi nkwakọ ngwaahịa mkpokọ kpatara nke ụdị ngwaahịa a ma ọ bụ na ejighi ụgbọ ụgbọ mbụ mbụ ha, esonye na ikike nke akwụkwọ ikike.
4.Gbochie onye ọrụ na-enweghị ikike ịkwasasị igwe ahụ, onye ọrụ iji wepu ngwaahịa ndị rụzigharịrị, adịghị n'etiti oke ikike ikike n'efu. Maka ngwaahịa adịghị maka oge akwụkwọ ikike, ụlọ ọrụ ahụ mebere ndụ ya na-enye ọrụ mmezi ụgwọ.
5.Maka nsogbu nke ngwaahịa n'etiti oge ikike, biko jupụta n'ụdị akwụkwọ ikike nke ọma. Kọwaa nsogbu ahụ zuru ezu. Nyekwa akwụkwọ ọnụahịa ịre ahịa mbụ ma ọ bụ nnomi ya.
6. N'ihi na mmebi na ọnwụ nke kpatara ọrụ nke onye ọrụ ahụ. Actorylọ ọrụ agaghị enwe ike ọ bụlaọrụ. Ego a na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ a na-akwụ maka mmebi nke okwukwe. Nleghara anya ma ọ bụ mmekpa ahụ agaghị agafe ego
nke ngwaahịa. Factorylọ ọrụ ahụ anaghị ebu ọrụ ọ bụla maka ihe pụrụ iche, atụghị anya ya na ọ ga-aga n'ihu mmebi ọ bụla ndị ọzọ mere.
7.Companylọ ọrụ anyị nwere ikike ikpeazụ maka ịkọwa maka okwu ndị a dị n'elu.
Akwụkwọ ikike Ọnọdụ
1.Na asịwo kwesịrị iziga malfunction ngwaahịa na anyị gosiri adreesị na akwụkwọ ikike kaadị ozi.
Mbupu ụgbọ mmiri nke RMA ma ọ bụ dochie ya.
2.Companylọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ otu ụzọ maka mbupu site n'aka onye nrụpụta na onye na-ekesa Channel ma ọ bụ onye zụrụ ya.
Niile njedebe nke onye ọrụ na-alọghachi ụlọ ọrụ anyị, biko kpọtụrụ ahịa anyị tupu oge eruo.